Iselula Idlula Ideskithophu Ye-imeyili Ivula | Martech Zone
Angikholwa ukuthi ngihlukile kunabantu abaningi. Ngibheka i-imeyili usuku lonke ku-iPhone yami ukuze kuthi lapho ngifika emsebenzini, ngikwazi ukugxila ezindabeni ezibaluleke kakhulu. Umakhalekhukhwini wami uyithuluzi lami eliyinhloko ekuvuleni nasekuhleleni imiyalezo engiyitholayo. Vele akunakulimaza lapho lawo ma-imeyili elungiselelwe amadivayisi eselula. Uma udinga usizo olungeziwe lokuthola i-imeyili yakho ibe nobungane ephathekayo, qiniseka ukulanda Indlela Yokwenza I-imeyili Yakho Ibe Yeselula.
Ababhalisile bathola ama-imeyili kuzingxenyekazi eziningi namadivayisi. Kungenzeka, i-imeyili yakho ishaya ibhokisi labo lokungenayo le-Gmail, ikhanyise iselula yabo, futhi mhlawumbe idluliselwe ku-akhawunti yabo yomsebenzi. Kepha uyazi ukuthi izithameli zakho zivula kuphi i-imeyili yakho yakamuva?
Lokhu infographic kusuka kuLitmus inikeza ubufakazi bokuthi umjikelezo ugcine uphendukile futhi iselula isidlule iklayenti le-imeyili ledeskithophu!
Tags: imeyilii-imeyili ye-iphonei-litmusi-imeyili ephathekayoukwakheka kwe-imeyili yeselulaizibalo ze-imeyili zeselula
Ngokuphelele Awe.sm Social Media Analytics